ပရိသတ်ကြီးရေ ယုန်လေးဆိုတဲ့ ပါလေရာငါးပိချက်ကတော့ ပြန်ပေါ်လာပြန်ပါပြီနော်။ သူလုပ်သမျှတွေက လူတွေအဆဲခံရအောင်ကို တမင်လုပ်နေသလိုပါပဲ။ အခုလည်း မင်းသားမင်းမော်ကွန်းက သူ့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့လိုက်တာကြောင့် ထိမိစွာဖြင့် ဆဲလိုက်ပါပြီ။ ယုန်လေးကလည်း သူ့အပေါ်ဆဲဆိုနေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းကို ဆရာကြီးလုပ်ကာ ပြန်ပြောလိုက်ပြန်ပါပြီ။ ” ဒါကျွန်တော် အချစ်ဆုံး အစ်ကို ထဲက တစ်ယောက် ကိုမင်းမော်ကွန်းပါ . ကျွန်တော့်ကို အမြဲတမ်းအားပေးတယ် .ငါတို့ အားလုံးရဲ့ မြေ သီချင်းတုန်းကလဲ ကျွန်တော့် ဘက်မှာ ရှိခဲ့တဲ့ အစ်ကိုပါ […]
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ.. အဆိုတော်ယုန်လးဟာဆိုရင် တေးသီချင်းများစွာကို သီဆိုခဲ့တဲ့အဆိုတော်တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ..။ယုန်လေးဟာဆိုရင် စစ်တပ်မှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ သင်္ကြန်ပွဲတော်မှာသွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ အတွက် ပရိတ်သတ်တွေ အကြီးအကျယ်ပေါက်ကွဲပြီး ဒေါသထွက်သည်အထိ ယုန်လေးကို စိတ်ဆိုးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။ ပီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်မှာလည်း ယုန်လေးရဲ့ကားကိုမီးရှို့ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ် ။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပီး ယုန်လေးက အခုလိုပဲပေါက်ကွဲစွာနဲ့ပြန်လည်တုန့်ပြန်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ..။ ယုန်လေးက ” အခု မှ လိုင်းရတဲ့ နေရာရောက်လို့ပါ ဒလံ ဆိုတဲ့ စကားအဓိပ္ပါယ်ကို သေချာ နားလည်နိုင်ပါစေ . အရင်ထဲက မကျေနပ်တာတွေ နဲ့ ရော […]
ကျော် မှတ်ထားတာလေးကို မျှဝေတာပါ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်က FB မသုံးစွဲကြပါဘူး နတ္ခတ္တရောင်ခြည် မဂ္ဂဇင်းကို လစဉ် ထွက်တာနဲ့ ဝယ်ဖတ်ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာက အခုလို ဆေးဖက်ဝင်သော အကြောင်းရာတွေကို အကိုးကားနဲ ပါလေ့ရှိပါတယ် ။ လွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးဝင်ပြီး အစွမ်းထက်သော အရာများကို မှတ့်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ မှတ်ထားတဲ အကြောင်းရာလေးကဒီလိိုပါ ဟင်္သတ မြိုနယ် တောရွာဘက်က ဦးလေးတယောက်ဟာ အရိုးကင်ဆာ ဖြစ်လို ဆေးရုံက ခြေထောက့် တဖက် […]
ညနေ ဆို မိန်းမစစ်သားတွေ ထမင်းချိုင့် နဲ့ ဂိတ်လာလာစောင့်ကြတာ၊ ခု စစ်သားတွေအကုန်လုံးနီးပါးရှေ့တန်းပါသွားတယ်။ (ဧပြီ-၁၂ ရက်နေ့) ကလဲ လက်နက်ကြီးတွေလဲ မပစ်တတ်ပဲ လျှောက်ပစ်နေတာ ထင်တယ်။ တခြားရွာထဲတင်မကဘူး.. ရဲစခန်း အိမ်ထဲကိုပါ တလုံးကျသွားတယ်။ စီဟက်ဘက်က တောရဘုန်းကြီးကျောင်းထဲ တလုံးကျသွားတယ်။ ဆရာတော် ခြေထောက်ပေါက်ထွက်သွားတယ်။ ခုမြို့သစ်စခန်းတခုလုံး ရဲတစ်ယောက်မှ မရှိတော့ဘူး။ ပို့လာတဲ့ စစ်ကူဆိုတဲ့ စစ်သား တွေလဲ အကုန် ရှေ့တန်းထဲမှာရောက်နေတယ်။ ရိက္ခာလဲ ပြတ်နေတယ် […]
မြန်မာပြည်သူတွေ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ အခြေအနေကို ဝင်ရောက်တားဆီးပေးဖို့ One Championship လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်းက အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင်ထံ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ သမ္မတဘိုင်ဒင်အနေနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် စကားပြောနိုင်ရင် နေ့တိုင်းဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် အကူအညီဖြစ်စေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းမီဒီယာတွေ ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့ခံနေရတဲ့အကြောင်း လူမှုကွန်ယက်တွေမှာလည်း စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ပြောဆိုလို့မရဘဲ အိမ်တွေထဲအထိ လာရောက်ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ကြောင်းနဲ့ သမ္မတဘိုင်ဒင်အနေနဲ့သာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ကို ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အားလုံးက ကျေးဇူးတင်ကြပါလိမ့်မယ်လို့ […]
မွန်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ်အလိုက် လူငယ်၊ ကျောင်းသား၊ ပြည်သူ၊ ဝန်ထမ်း၊ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ရပ်မိ၊ ရပ်ဖများ စုစည်းပြီး အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (မွန်ပြည်နယ်) ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း ဧပြီလ ၂၂ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ပြည်သူ့အာဏာ ပြည်သူပြန်ရရေး၊ မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူများ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအပါအဝင် အချက်ငါးချက်ဖြင့် စစ်အာဏာရှင် အမြစ်ပြတ်ရေးအတွက် ဦးတည်ကြောင်း ရေးသားထားသည်။ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (မွန်ပြည်နယ်) သည် ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်မပေါ်ထွန်းလာမီ စပ်ကြား အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG)၏ […]
စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကို ဖမ်းဆီးပေးရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့ (INTERPOL) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးထံသို့ NUG ကအကြောင်းကြားစာပေးပို့ စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်ကို ICJ နှင့် ICC တရားရုံးများသို့ တရားစွဲတင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် မြန်မာနိုင်ငံအရေး အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ လာရောက်ချိန်တွင် ဖမ်းဆီးပေးရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့ (INTERPOL) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးထံသို့ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပြည်ထဲရေးနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး […]
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်က အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ် ဗိုလ်မှူး ညွန့်နိုင်ဟာ အကြမ်းဖက် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ တာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အတွက် အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု (CDM) မှာ ပါဝင်ပြီး ကေအန်ယူ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ သထုံခရိုင် (တပ်မဟာ ၁) ကို ဝင်ရောက်ခိုလှုံခဲ့တယ်လို့ KIC သတင်းဌာနက ဖော်ပြပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးညွန့်နိုင်က အမှတ် ၇ ခြေလျင်တပ်ရင်းက ထွက်ပြီးနောက် မတ်လ ၉ ရက်နေ့မှာ ခိုလှုံခဲ့တာလို့ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအန်ယူ) […]
အင်ဒိုနီးရှားရေငုပ်သင်္ဘောရေငုပ်သွားတဲ့နေရာနားမှာ ဆီကွက်ကြီးတွေ့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီရေငုပ်သင်္ဘောဟာ ယနေ့မနက် အင်ဒိုနီးရှားစံတော်ချိန်မနက် ၃ နာရီမှာ ရေငုပ်ခွင့်တောင်းခံပါတယ်။ ရေအောက်ငုပ်သွားပြီးမကြာခင်မှာပဲ အဆက်အသွယ်ပြတ်ကာ စုပ်စမြုပ်စပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ မနက် ၇ နာရီမှာတော့ အဲ့ဒီရေငုပ်သွားရာနေရာနားမှာ ဆီကွက်ကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားကာချုပ်က မနက်ကျရင်အဲ့ဒီနေရာကိုလိုက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အရင်ကအင်ဒိုနီးရှားမှာ ဆိုဗီယက်လုပ်အပါအဝင် ရေငုပ်သင်္ဘော ၁၂ စီးရှိခဲ့ရာက အခုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ KRI Nanggala 402 အပါအဝင် ၅ စီးပဲကျန်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ KRI Nanggala 402 မှာ အမွှာဖြစ်သူ […]